Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » म झुक्नेवाला छैन छिट्टै सरकार कब्जा गर्ने ठाउँमा पुग्छाैँ रुकुम पुगेर हेर्नुस के के भने त प्रचण्ड?
म झुक्नेवाला छैन छिट्टै सरकार कब्जा गर्ने ठाउँमा पुग्छाैँ रुकुम पुगेर हेर्नुस के के भने त प्रचण्ड?
२०७७ चैत २४ गते मङ्गलबार ०६:५४
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कर्णाली प्रदेशको सरकार बचाउन आफू लागिपरेको बताएका छन्। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही छन्। उनलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णाली प्रदेशको सरकार बचाउन आफू लागिपरेको बताएका छन्।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही छन्। उनलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता गरेको छ भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्।
मंगलबार रूकुम पश्चिम पुगेका प्रचण्डले त्यहाँ आयोजित जन प्रशिक्षणमा बोल्दै आफ्नो पार्टीको सरकार बचाउन लागिपरेको बताए।
‘प्रदेशमा हाम्रो सरकार थियो, अपदस्त गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने, ‘म लागिरहेको छु सकेसम्म हाम्रो नेतृत्वको सरकार बचोस्। हामी अहिले पनि छलफलमा छौं। यो कार्यक्रमपछि पनि छलफल गर्छौं। तर यदि सबै मिलेर अपदस्त गर्ने स्थिति बन्यो भने पनि हामी अपदस्त हुँदैनौं।’
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस्ने पनि बताए।
‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा जनताका साथमा बसेर फेरि केही समयभित्रै सरकार कब्जा गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौं, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय रूपमा पनि विजयी हुनेछौं,’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू पुन: जनताका काखमा आइपुगेको बताएका छन्।
मंगलबार रूकुम पश्चिममा भएको जनप्रशिक्षण कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्ड आफूलाई दु:खमा बचाउने नेता तथा कार्यकर्ता पछि परेकोमा आत्मआलोचना पनि गरेका छन्।
उनले इमान्दार कार्यकर्तालाई अब पार्टीमा अगाडि बढाउने बताए।
‘इमान्दार कार्यकर्तालाई पार्टी, नियुक्तिहरू र मन्त्री बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मैले गल्ती गरेँ। सहिद परिवार ओझेलमा परेजस्तो भयो भने जनयुद्धमा त्याग गर्नेहरू पनि ओझेलमा परे। अब म त्यस्तो गर्दिनँ। हिजो युद्धमा लागेकालाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्छु,’ उनले भने।
उनले प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई खबरदार गर्न आफू जिल्ला आएको पनि बताएका छन्।
‘सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिक्रान्तिहरूलाई खबरदार भन्न रूकुम पश्चिम आएको हुँ खबरदार,’ उनले भने। आफूलाई जनताको साथ भएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रचण्ड कमजोर भयो। जनताको साथ छैन। संविधान र गणतन्त्र उल्टाइदिए हुन्छ भनेर केहीकेही मानिसले सोचेका छन्। मसँग मेरो पार्टी छ नेता कार्यकर्ता छन्,’ उनले भने, ‘मसँग क्रान्तिकारी जनताको ऊर्जा शक्ति छ।’
उनले आफू जनताका काखमा गएर प्रतिगमनकारीलाई चुनौती दिने आँट आफूमा भएको बताए।
प्रकाशित मिति २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १८:५४